Bato reCCC rinoti Misangano Yaro muKupera kweSvondo Yave Kuzoenderera Mberi Mushure Mekugara Pasi neMapurisa
Mutauriri weCitizens Coalition for Change, Muzvare Fadzai Mahere
Mapurisa anonzi amborambidza bato rinopikisa reCitizens’ Coalition for Change kuita misangano nevatsigiri varo mukupera kwesvondo kuMarondera nekuBinga North.
Tsamba dziri mumaoko eStudio 7 dzinoratidza kuti mapurisa anga ashandisa mutemo weMaintenance of Peace Act, kana kuti MOPA, kurambidza bato reCCC kuita misangano nevatsigiri varo kuMarondera mangwana uye neMuvhuro kuBinga North.
Asi mutauriri weCCC, Muzvare Fadzayi Mahere, vaudza Studio 7 kuti misangano yavo yave kuzoenderera mberi kuMarondera, Binga North, Beitbridge neTsholotsho mushure mekuita musangano nemapurisa.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition, VaObert Masaraure vashora kumborambidzwa kweCCC kuita misangano yayo panguva iyo bato reZanu PF risiri kurambidzwa kuita misangano yaro.
VaMasaraure vakurudzira komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuti imire pakati ichigadzirisa nyaya dzakadai.
Asi mutauriri weZEC, Amai Joice Leticia Kazembe, vaudza Studio 7 parunhare kuti komisheni yavo haina kwayakarerekera, vakakurudzira kuti mapato ane zvichemo asvitse zvichemo zvawo kukomiti ye multi-party liason kuti nyaya idzi dziongororwe.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato reDemocratic Party, VaUrayazi Zembe, vati zviri kuitwa nemapurisa zvekurambidza VaChamisa nebato ravo kuita misangano zvinoratidza kuti munyika hamuna hutongi hwejekerere.
Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo tatadza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyathi.
Zvichakadai, Zanu PF yakatarisirwa kuitawo misangano mikuru miviri nevatsigiri vayo mukupera kwesvondo.
Musangano uchaitwa ku Karoi mangwana Mugovera uchange uchitungamirwa nasachigaro vebato iri Amai Oppah Muchinguri-Kashiri kuchitiwo nemusi weSvondo mutevedzeri wemutungamiri webato reZanu PF uye vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika, VaConstantino Chiwenga vachange vachisangana nevatsigiri vebato ravo kwaMutare.